गुलरियामा रातिको समयमा हुन्छ खसी–बोका ओसारपसार ! « News24 : Premium News Channel
गुलरियामा रातिको समयमा हुन्छ खसी–बोका ओसारपसार !
गुलरिया, ७ जेठ । गुलरिया नगरपालिका–११ का २८ वर्षीय एक युवक, जसले काठमाडौंको कालिमाटीमा मासु ब्यापार गर्दै आएका थिए । ती युवकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि पनि भएको छ । तर, उनले बर्दियाबाट रातिको समयमा खसी–बोकाहरु काठमाडौंसम्म पु¥याउदै आएको खुलासा भएको छ ।
बर्दिया जिल्लामा विगत लामो समयदेखि खसी–बोका तस्करी हुने गरेको सुनेको थिएँ तर, प्रत्यक्ष देखेको थिएन । लकडाउनको समयमा सबैजना घरभित्रै रहेकाले बाहिर सडकहरुका खासै आवतजावत देखिदैन ।
यसैबीच, विगत १५ दिनदेखि भारतीय गाउँ–बस्तीबाट खसी–बोकाहरु गुलरिया भित्रिरहेको एक जना प्रत्यक्षदर्शीले हामीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भारतबाट करिब एक सय बढी खसी–बोका बर्दिया भित्रिएको छ ।’
त्यसपछि मैले उनलाई भने, ‘घरमै राखिएको खसी–बोकाको कुरा किन गर्ने ? कतै पठाउन थाल्यो भने हामिलाई जानकारी गराउनु ।’
यसैक्रममा आइतबार र सोमबार लगातार खसी–बोका लिनका लागि गाडी गुलरिया बजारमै आयोे, तर कुरा नमिलेपछि गाडी रित्तै फर्कियो । यसैबीच मंगलबार राति ९ बजे मलाई ती ब्यक्तिले पुनः फोन गरे ।
उनले दिएको सूचनाको आधारमा मैले नेपाल प्रहरीका फिल्डमा खटिएका चार जना प्रहरीलाई समेत जानकारी गराए । उनीहरुको कुरा सुनिसकेपछि मलाई अचम्म लाग्यो, त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डीएसपी योगेन्द्र कुमार खड्कालाई ९८५८०२७२९९ मा फोन गरे ।
तर, उनले मेरो फोनको रेस्पोन्स गरेन । त्यसपछि मैले सीधै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका एसपी केदार रजौरेको कार्यालयमा ९८५८०३५५५५ नम्बरमा सम्पर्क गरेर भने, ‘एसपी सा’ब ! गुलरियाबाट एक ट्रक खसी–बोका काठमाडौं लगिदैछ, कसरी ? भनेर प्रश्न गरे ।
यस विषयमा एसपी केदार रजौरेले आफूलाई जानकारी नभएको हुनाले, त्यस विषयमा बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए । यति गर्दा गर्दै रातिको ११ बजेको थियो । सूचना दिने व्यक्तिले प्रहरीको ४ जनाको टोलीनै उक्त स्थानमा रहेको जानकारी समेत गराए ।
विगत १५ दिनदेखि हामीलाई सूचना दिने ती व्यक्तिको आवाज निकै चिन्तित सुनिन्थ्यो । उनले भनिरहेका थिए, ‘दाई ! जसरी पनि यिनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिनुप¥यो । यहाँ निकै खतरा बढेको छ ।’
त्यसपछि मैले रातिको ११ बजे नै नेपाल प्रेस युनियन–बर्दियाका अध्यक्ष बिनयराज भण्डारीलाई घटनाको विवरण बारे जानकारी गराएँ । प्रहरीले नियन्त्रणमा नलिए आफूनै त्यहाँ जानुपर्ने सुझाए ।
त्यसपछि हामी रातको ११ बजे गुलरियाबाट निस्कने भादापुल नजिकै रहेको पशुहाटमा बस्यौ । ट्रकमा खसी–बोका लोड भइसकेको र त्यहाँ चार जना प्रहरीको टोली पनि रहेको सूचना हामीलाई आइरहेको थियो ।
रातको ११ः३५ बजे उक्त ट्रक हिँड्यो । ट्रकको अगाडि दुई वटा मोटरसाइकलमा हतियारसहित चार जना प्रहरी सवार थिए । ती दुवै वटा मोटरसाइकल अगाडि गइसकेपछि हामीले उक्त ट्रकलाई रोक्न लगायौं ।
उक्त ट्रकमा चालक र अर्को एक जना सहयोगी थिए, हामीले सबै कागज–पत्र हे¥यौं । तर, सबै नक्कली थिए । उक्त नक्कली कागज–पत्रमा बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्टले दस्तखत पत्र थियो ।
जहाँ पत्रमा प्रष्ट लेखिएको थियो, ‘गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ को सीतलाबजारबाट खसी–बोका लैजाने अनुमति दिइएको छ ।’
हामीले टक रोकेर बुझ्दा गर्दा पाँच मिनेटभित्रै नेपाल प्रहरीको मोबाइल गाडी पनि आइपुग्यो । हामीले उनीहरुकै जिम्मा लगाएर राति १२ बजे घर फर्कियौं ।
खसी–बोका कहाँबाट आयो ? कसरी र कहाँ लगिदै छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उदासीनता देखाउनु र शसस्त्र प्रहरीको एसपीको फोन रिसिभ नहुनले शंका उब्जिएको छ ।